Ukubaluleka okukhulu kwamandla omoya namapaki awo | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Ukuhlaziya ukubaluleka kwamandla omoya emkhakheni wezamandla womhlaba, kuyadingeka ukuthi kubhekwe zonke izixhumanisi ezikule ketane ukuthi ayadingeka ukwenza ubucwebe obusemqhele, ophephela odumile womoya lokho kwenza amapulazi omoya, isilo sobuchwepheshe sokuziphendukela kwamanje.
Ngokulandelayo sizochaza ukuthi la mapulazi omoya asebenza kanjani. Ngaphandle kwe- ukubaluleka okukhulu kwamandla akhiqizwayo kubo ezimpilweni zethu, futhi njengenye indlela yesikhathi esizayo esiseduze.
1 Ukusebenza kwepulazi lomoya
3 Ipulazi lomoya elikhulu kunawo wonke eSpain lise-El Andévalo (Huelva)
4 Ikuphi i-Andévalo?
Ukusebenza kwepulazi lomoya
Ukuxhashazwa kwe- 1 MW ophephela efakwe epulazini lomoya lingafinyelela gwema amathani angama-2000 e-carbon dioxide (CO2), uma ugesi okhiqizwayo ukhishwe yizitshalo ze-thermoelectric.
Ngokubhekisisa zonke izixhumanisi ezikule chain, amandla nezinto zokwakha ezidingekayo kokubili ukukhiqiza Ngokuqondene nokuqedwa kwama-wind turbines, kungaphawulwa ukuthi ibhalansi yamandla asetshenzisiwe iyathandeka.
Umjikelezo wempilo wama-turbine omoya nawo uyafundwa. A 2,5 MW ophendulwa ngumoya, ngempilo esebenzisekayo engaba yiminyaka engama-20 ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zokusebenza, ingakwazi ukhiqize kuze kufike ku-3.000 MW ngonyaka, okwanele ukusetshenziswa kokuzungezile Imindeni eyi-1.000 3.000 kuya kwayi-XNUMX XNUMX (kuya ngokuthengiswayo) ngonyaka. Isikhathi sokusebenziseka kwenjini ephendulwa ngumoya kulinganiselwa phakathi kweminyaka engama-20 nengama-25.
Ungahlukanisa i- "okuncane " umshini womoya (kusuka kumashumi ambalwa ama-watts kuze kufike ku-10 KW) okusetshenziselwa i- ukudonsa amanzi noma ukuhlinzeka ugesi ezindaweni ezingazodwa, yemishini yomoya enamandla kakhulu (kusuka ku-50 KW kuya ku-5 MW) exhunywe kumanethiwekhi kagesi, okuyilawo asathuthuka ngokwengeziwe. Lezi zokugcina zivame ukuhlanganiswa kabusha kulokho okubizwa ngokuthi eolico Ipaki.
Cishe yonke imishini yomoya ekhiqiza ugesi iqukethe i-rotor enezinhlamvu noma izindwani ezizungeza i-axis enezingqimba. Lokhu okunamathiselwe enhlanganweni yokudlulisela ngomshini noma ukuphindaphindeka futhi, ekugcineni, kuye ku- I-generator kagesi, womabili atholakala endaweni yesikhulumi elenga phezulu kombhoshongo.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi blade ubude Kuzoba nesinqumo esinqumayo ukukhiqiza amandla noma ijubane elingaphezulu noma elincane, ngoba lapho kukhula i- indawo enkulu eshanele izofinyelela futhi ngokusobala izokhiqiza i- amandla akhuphukile.
Abaphikisi bamapulazi omoya emazweni athuthukile bavame ukuphikisana nge- ukungcoliswa okubukwayo, umsindo wayo nokuthi ukukhiqizwa kwayo akwanele ukuhlangabezana nezidingo zamandla. I- amandla omoya Kufanele kuthathwe njengomthombo omusha wamandla, amandla ahlanzekile, aguqukayo futhi ahambisane nezinye izinhlobo zokukhiqiza.
Ngokuqondene ne ukungakhululeki ukuthi kungadala, bayohlala njalo bebaningi ingaphansi kwaleyo ebangelwa ezinye izinhlobo zamandla njenge, isibonelo, njengamandla amalahle noma enuzi.
Masingakhohlwa ukuthi njengamandla akhiqizwa umoya, nokunyakaza kwawo, kungamandla e-kinetic ngakho-ke akungcolisi, futhi-ke omunye wamandla ahlanzekile kunawo wonke Yini esingayithola.
Inselelo yesikhathi esizayo ukuthi thola umthombo wamandla oshibhile, ongangcolisi, ovuselelekayo nofinyelelekayo kubo bonke amazwe omhlaba (kunzima ngama-lobbies laphaya), evumela ezokuthutha, izimboni kanye namakhaya ukunciphisa ukuncika esinakho ku-oyela namuhla, futhi kubonakala sengathi amandla omoya ingenye yezindlela ezingcono kakhulu kulokhu.
Ngenkathi i-Andévalo iphethwe eminyakeni embalwa eyedlule, inkampani yahlanganisa isikhundla sayo se- umholi wamandla amandla omoya kokubili e-Andalusia, eno-851 MW, naseSpain yonkana, nge-5.700 MW.
Sekukonke, le 292 MW eshiwo ngenhla, evumela ukukhiqizwa kwamandla kagesi kwalesi sitshalo esikhulu ukuhlinzeka ngemizi eyi-140.000 futhi kubalwa ukuthi kugwema ukungcola umkhathi okungekho ngaphansi kuka Amathani we-510.000 ye-CO2.
KwakungoFebhuwari 2010 lapho U-Iberdrola Renovales ithathe ubunikazi bayo yonke inkimbinkimbi. Ipulazi lomoya iLos Lirios kwaba elokugcina elalithola, ngaphakathi kwesivumelwano sokuthengiswa kwepulazi lomoya kanye nesivumelwano sokuthenga e-Andalusia esisayinwe noGamesa. Lo msebenzi, oyingxenye yesivumelwano esasayinwa yizo zombili izinkampani ngo-2005 sokudayiswa kwamapulazi omoya e-Andalusia. Kwakhe izindleko zokugcina zeqe ama-euro ayizigidi ezingama-320.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Ukubaluleka okukhulu kwamandla omoya
ANA ISPAPA kusho
Kungenzeka kanjani ukunquma ukuthi insimu ipulazi lomoya lifakwe kuphi?
Yiziphi izici zokunquma kokuklanywa nokufakwa kwayo?
Phendula ku-ANA ESPAÑA
I-Avangrid, inkampani engaphansi kwe-Iberdrola, izokwakhela i-Apple ipulazi lomoya